Fros Suu Blog Entry `Memory of Eden's Gate: Inundation first clear` | FINAL FANTASY XIV, The Lodestone
Memory of Eden's Gate: Inundation first clear
Enrage ဘားတန်းကြီးက စ count down လို့ တဝက်ကျော်နေပြီ
Boss HP က 0.4%
AOE attack တွေကလည်း အဆက်မပြတ်လာနေတယ်
Heal ဖို့ Aether pac ကလည်း တလုံးမှမရှိတော့
Succor ကိုပဲ spam ပေးနေရတယ်
Damage boost ပေးဖို့ Chain Strategem ကလည်း count down မပြီးသေး
"လုပ်ပါဟ လုပ်ပါဟ .. ရနိုင်သေးတယ်"
"Tank LB သုံး .. Tank LB သုံးလိုက်"
"ဟာ ... စောသွားတယ် ထင်တယ်"
"ရတယ် ရတယ် ... ချတော့"
"ဒီတခါတော့ ကျနော် ထ,မကတော့ဘူး"
"WTF ... နိုင်သွားတယ် ဟ! ရေး....."
နောက်ဆုံးမှာ 0.01 sec အသာနဲ့ အနိုင်ရသွားတယ်
၄ပတ်နီးနီး တစ် ခဲ့ပြီးနောက် အောင်နိုင်သွားတာမို့ ပျော်မိတယ် ။ တကယ်တော့ mechanic အကုန် သိနေကြပါပြီ ။ မှတ်မိနေကြပါပြီ ။ Enrage အပိုင်းကိုတောင် ရောက်ဖူးကြပြီးပြီ ။ ရှေ့တစ်ရက်ကတည်းက နိုင်သင့်နေတာမှန်ပေမယ့် အဖွဲ့ဝင်ထဲ အိပ်ငိုက်နေကြတာနဲ့ ကွန်နက်ရှင်က လာဝင် နှောင့်ရတာနဲ့ နောက်ဆုံး ရှုံးပဲ ရှုံးနေခဲ့တာ
တကယ်ဆို အစက ကိုယ်တွေ မသေသင့်ခဲ့ဘူး ။ အမေက တခုခု ယူခိုင်းလိုက်တာအပေါ် စိတ်ရောက်သွားပြီး သတိတချက်လွတ်သွားတော့ အဲ့ဒီမှာ သေသွားခဲ့တာ ။ ဒါပေမယ့် ကံကောင်းသွားတယ် ။ Main healer ကြီးလည်း နိုင်နိုင်နင်းနင်း ကိုင်တွယ်သွားတော့ DPS တွေလည်း တစ်ယောက်မှ မသေ ၊ tank တွေလည်း မသေပဲ နောက်ဆုံး enrage part ရောက်ခါနီး ကပ်သီလေးမှာ နိုင်သွားတယ် ။
တကယ်ဆို ကိုယ်မသေရင် enrage part တောင် မရောက်လိုက်ပဲ နိုင်သွားမှာ
patch တိုင်း savage content တွေကို ၄ ခုမှာ ၂ ခုလောက်ပဲ အမြဲဆော့နိုင်ခဲ့တာမို့
ဒါဟာ ကိုယ့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသော တဆက်တည်းနဲ့ ၃ ခု မြောက် Savage raid content ကို အောင်နိုင်ခြင်းပါ